26 April 2013- Fante Online
JAMIATUL MUBASHIREEN, GHANA
EKUMFI-EKRAWFO, CENTRAL REGION
FRIDAY SERMONS Chevron
2013 Friday Sermons
2014 Friday Sermons
2015 Friday Sermons
Visits of Khulafa
LATE AMEER OF GHANA
Friday Sermon: Inculcate Truth and Justice
- 26th March 2013 - Fante Translation
ME HYƐ ASE WƆ NYANKOPƆN NE DZIN MU, ƆDOMFO, MBƆBƆRHUFO NO.
Fida Nyamesɛmka: Ebͻwbira 26, 2013.
(Friday sermon – 26th April, 2013 – Fante Translation)
HOM MFA NOKWARDZI NA PƐRPƐRYƐ NKYERƐKYERƐ.
O! hom nkorͻfo a hom agye edzi! Hom ngyina pintsinn mma pɛrpɛryɛ na hom nyɛ adasefo mma Nyankopͻn sɛ otsia hom ankasa anaadɛ hom awofo na hom ebusuafo mpo a. Sɛ ͻyɛ ͻdzefo anaa ohianyi, Nyankopͻn woyi hom beenu ho kyɛn no. Dɛm ntsi mma hom nndzi honam akͻndͻ ekyir ama hom eetum edzi nokwar pɛpɛɛpɛ.Na sɛ hom dze nokwar sie anaadɛ hom yi no akwa a ͻno hom nkae dɛ Nyankopͻn enyi tua dza hom yɛnyinara (4:136).
O! hom a hom agye edzi! Hom nggyinae pintsinn wͻ Nyankopͻn kwan mu, dɛ hom bedzi dase pɛpɛɛpɛ na mma hom mma nkorͻfo hͻn enyitan mmpuw hom ma hom nnyɛ dza ͻmmfata dɛ hom bɛdzi pɛrpɛr. Aber biara dzi pɛrpɛr, iyi bɛn tseneneeyɛ ho papaapa.Na suro Nyankopͻn. Ampaara Nyankopͻn nyim dza hom yɛ.
Nyankopͻn ahyɛ hͻn a wͻgye dzi na wͻyɛ ndzepa no dɛ wobenya bͻnfakyɛ na akͻtua mapa (5:9-10).
Mber pii Islam n’atamfo susu dɛ Islam yɛ som a wͻyɛ ndzebͻn ma ͻtra do, ma dɛm ntsi ͻtwetwe ͻtan bra no. Ewurkadze biara a wͻyɛ no wiadze yi mu no, dɛm nkorͻfo a wͻfrɛ hͻn Muslimfo na wͻyɛ, binom anaadɛ hͻn a wͻato hͻnho dzin dɛ wͻyɛ Islam mboanofo anaa Jihad ekuwekuw, hͻn ndzebͻn no wͻdze hyɛ Kuran Krͻnkrͻn na Nkͻnhyɛnyi Krͻnkrͻn (NNN). Na wͻkeka nsɛm a wͻgye ebufuw eso wͻyɛ fi fa hͻnho. Mber yi mu yi, Asomfo a wodzi nokwar na woesi pi etu hͻnho ama a wͻka Nkͻnhyɛnyi Krͻnkrͻn (NNN) do no nna wͻnam Kuran Krͻnkrͻn do yi ano tsia dɛm nsɛmkekae yi a ͻdze ayɛka ba yi. Dza ͻka Kuran mu nsɛm yɛ som a wͻyɛ ewurkadze mbordo no bi nye dza ͻwͻ sor hͻ no a yedzii kan kenkanee no. Dɛm nsɛm yi a yɛkenkanee yi yɛ Islam ne nkyerɛkyerɛ wansewanse ne mfatoho bi. Obiara a ͻnnyɛ Muslimnyi a n’adwen mu da hͻ bɛkanfo Islam ne nkyerɛkyerɛ yi a no mudzi wͻtow n’abaw a onnhyia yi naaso obebisa dɛ henfa na dɛm nkyerɛkyerɛ yi wͻdze kͻ ndzeyɛɛ mu? Hͻn a wͻnnyɛ Muslimfo a wͻnye hɛn kuwmba wͻ nkitahodzi no kyerɛ hͻn adwen dɛ, mbom wohu dɛm nkyerɛkyerɛ yi ne nyɛe wͻ kuw yi mu na hͻn dodow fsuar na dza wͻrohwehwɛ ehu nye dɛ nkyɛ ekuwekuw nkaa no so bɛyɛ dɛmara. Ahmadiyyafo nam hͻn ankorankor ntseasee na adwmdahͻ do dzi dɛm dwuma yin a ͻtaa dɛ nkorͻfo enyi gye ho.
Mbom ͻwͻ dɛ yesi no ewur ka dɛ mbrɛ ndzɛmba tse na yɛhwehwɛ hɛnara hɛn ndzeyɛɛ mu. Nokwar, yɛbͻ mbͻdzen dɛ yeyiyi nsɛmbisa ano yie ma odzi mu ara so yie. Nkorͻfo hu no siesie dɛ hͻn a wͻawea adwenkyerɛ wͻ nsɛm ho no rekyerɛ hɛn ho nsɛm a ͻyɛ a wͻbͻ hɛn dzin anaaso wͻmmbͻ hɛn dzin ka dɛ Muslimkuw bi a hͻn dodow suar tsia ewurkadze ne nyɛe na ͻkyerɛ pɛyɛ wͻ nokwardzi ho na ͻda noho edzi dɛ ͻno na ͻdze nokwar Islamsom no kͻ nyɛe mu. Sɛ Hadhrat Khalifatul Masih tsie obinom hͻn adwenkyerɛ anaaso ͻrekyerɛ Islam nkyerɛkyerɛ no kyerɛ obinom a, ohu dɛ ohia no na ͻtwe n’adwen gyina nokwar do dɛ ͻwͻ dɛ yɛkaakaa na yɛpeͻwpeͻw mu hu mbrɛ yɛdze hɛn nkyerɛkyrɛ kͻ nyɛe mu. Ana yɛhu dɛ oyie dɛ mber kumaabi mu no yɛma hͻn a wotsia hɛn no ka hͻn ano to mu na sɛ wiadze mba yɛ hɛnho mpɛnsampɛnsamu a nna dza yɛka fa hɛnho no nntse dɛm?
Sɛ kuw biara kͻ ahokyer mu na okuwba biara dze Nyankopͻn Ne nkyerɛkyerɛ kͻ nyɛe mu a onya Nyankopͻn enyigye dɛ woesi nkitsi rosͻw obende no. Ne mdzeyɛɛ wͻ dɛ odzi mu ara ma ͻma ofi dɛm tsebea no mu sͻkyee. Sɛ ammba no dɛm dze a, ͻno dɛ erekyerɛ nkyerɛkyerɛ ne fɛɛfɛw ara kɛkɛ no mma kuw a wͻnnyɛ no nkyerɛ no frͻdͻͻyɛ. Ndandzemba dodowara a wͻnnyɛ Ahmadiyya Muslimfoͻ wͻdɛ wͻdze Islam ne nkyerɛkyerɛ fɛɛfɛw no a wͻdze bɛma hͻn no bɛda Islam n’ahoͻfɛw edzi na annhwɛ a ͻama hͻn a wͻnnyɛ Muslimfo no enyi agye hͻn ho, na ͻnam enyidze na nkitahodzi ntsi annhwɛ a nna hͻn a wͻnnyɛ Muslimfo no egyaa dɛ wͻkasa tsia Islamsom.
Mbom, Ahmadiyya Muslimfo dze Islam ne nkyerɛkyerɛ fɛɛfɛw no rema adasa a, ͻwͻ dɛ wͻkaakaa hͻn adwen na wͻda hͻnho edzi dɛ wͻyɛ Ahmadiyya Muslimfo na wͻyɛ nyia no a ͻkaa maa noho dɛ ͻrebɛda Islam a ͻtͻdo ebien no edzi no n’akadofo. Ahmadiyyanyi no a ͻrekyerɛkyerɛ mbrɛ Islam n’ahoͻfɛw tse no, mma onyia no nnyɛ obi a ͻsɛ ayɛyi nko bi, na ͻma kuw no a ͻma nokwardzi na asomdwee ba no so krͻn. Sɛ soronko bi bɛba dza Ahmadiyyanyi yɛ na asɛm a ͻka a nkorͻfo bɛka dɛ osimesi ka asɛm bi na ͻyɛ dza ͻnye no bͻ ebira anaaso ͻmma nokwardzi nnhyɛ mã. Nokwar dɛ, wͻka ntsɛmara dɛ osimesi yɛ Ahmadiyyanyi na wͻka nsɛm pii da hͻn no edzi na wͻka dɛ hͻn na wodzi bano wͻ nokwardzi na pɛrpɛryɛ mu, mbom binom wͻ mu a wͻdze dza otsia pɛrpɛryɛ kɛsekɛse abebar hͻnho. Nkorͻfo bi a wͻnye Ahmadiyyafo dzi gua kyerɛw kɛma Hadhrat Khalifatul Masih wͻ nokwar na pɛrpɛr a Ahmadiyyafo nndzi ho. Dɛm kwan yi Ahmadiyyanyi gu Kuw yi no fi na ͻma kasa ba ho. Ɔnam dɛm ntsi ͻyɛ bͻn mbordo osiandɛ dza ͻka ma noho no ne ndzeyɛɛ bͻ ebira. Nokwar yi so haw Anohoba Messiah (ANN) ma ͻkaa dɛ mma nkorͻfo nngu n’enyim ase wͻ ber a wͻdze hͻnho abͻ noho.
Nsɛm a wͻbobͻͻ edzin wͻ akenkan no mu wͻ dɛ wͻdze kͻ nyɛe mu wͻ tsebea biara mu, dɛm nyɛe nkotsee na ͻbɛyɛ wo su ma egyaa bͻn yɛ.Ogye obi abamba ma ͻnndwen dza ͻyɛ bͻn ho, dza ͻnnyɛ pɛrpɛr, adze biara a wͻatwen efi nokwar ho anaadɛ biribi ne nyɛe a ͻbɛhaw obi. Dza ͻda Nyankopͻn ne nkyerɛkyerɛ na Islamsom no su a ͻyɛ fɛw edzi papaapa no, sɛ Ahmadiyyafo dze kͻ nyɛe mu a nkyɛ abedzi mu. Sɛ yɛbͻ mbͻdzen dɛ yɛbenya dɛm gyniabew yi a yɛakenkan efi Kuran mu yi wͻ tsebea biara mu a, wͻ hɛn efiefi, wͻ dͻm mu, hͻn anyɛnkofo mu, hͻn a wͻkeka ho na hɛn atamfo mu! Iyi nkotsee na ͻbɛma obi ayɛ gyedzinyi nokwarfo na woebu no dɛ ͻyɛ mber yi mu Imam no ne kadofo, ammba no dɛm dze a, dza yɛka fa hɛn ho no bɛka dza Anohoba Messiah (ANN) dween no bͻ mberɛw, nokwar yeyi no takyen koraa.
Dwumadzi a odzi kan a wͻdze ahyɛ Kuran mu a yɛakenkan asͻpͻn no nye dɛ yɛfa Nyankopͻn Ne mbransɛm no do dzi dase. Onnyi dɛ yedua hɛn ara hɛn su do dzi dase, mbom ͻwͻ dɛ yedzi dase dze hwehwɛ Nyankopͻn enyigye. Afei wͻda no edzi dɛ nsa bɛka iyi a ͻwͻ dɛ yɛbͻ bra a ͻkrͻn, na iyi bɛyɛ yie a gyedɛ nokwardzi si pi. Nkyii so, sɛ ͻbɛyɛ yie a, gyedɛ idzi Nkͻnhyɛnyi Krͻnkrͻn (NNN) ne nhyɛsɛm a ͻkyerɛ dɛ yɛ adze ma obi dɛ mbrɛ ebɛyɛ ama woara wo ho. Onnyi dɛ ͻba no dɛ obi n’enyi da na ͻpɛ dɛ obenya pɛrpɛr na wͻammfa amma no ma ͻgye no ebufuw no, na ͻba no dɛ wͻyɛ obi n’apɛdze ma no a, ͻno ͻhyɛ ase siw ho kwan. Sɛ epɛ dɛ inya pɛrpɛr ma wo ho a, Kuran nyiyimu, Ahadith na Anohoba Messiah dza (ANN) ͻkyerɛwee a ͻdze Nyankopͻn ho suro hyɛ obi a ͻretsiatsia fahodzido ͻnye nyimpa no so a osiesie nsɛmansɛma no. Mbom, obi wͻ dɛ odzi dase nokwar mu a, dɛ nkyɛ obedzi dase nokwar no, otum ka nsɛm kowakowa no yɛ no bisibisi basaa, mpo otum ka asɛm no dze ma noho nyimpa anaa no dofo bi. Iyi nye egyidzifo nokwarfo hͻn suban osiandɛ dza gyedzinyi bɛyɛ biara, ͻyɛ dze hwehwɛ Nyankopͻn N’enyigye. Iyi ma obi mpo tum dzi dase dze tsia ͻnoara noho.
Onnyi dɛ obi ma nokwar dasedzi mu ͻhaw haw no wͻ kwan biara do. Iyinom botum ama obi n’ebusuafo, ne mba, n’ayɛnkofo anaa n’awofo mpo akͻ ͻhaw mu, sɛ odzi dase nokwar mu a. Kansa nokwar dasedzi bɛma obi no nkorͻfo na n’adofo edzi noho yaw mpo a, ͻwͻ dɛ odzi dase a ͻtse dɛm no nokwar mu. Nyankopͻn aka dɛ, nnyɛ nyimpa ne nyansakorͻno a ͻdze dzi dase na ͻma ͻyɛ ͻdzefo, mbom ͻyɛ Nyame N’adom. Sɛ Nyankpͻn pɛ a, nna Ɔma obi nya yiedzi. Obi botum enya mfaso kumaabi wͻ dasekrum do, naaso no nsunsuando no mu ͻhaw no dͻͻso. Dɛm ntsi ͻwͻ dɛ obiara dze Nyankopͻn yɛ ne nyanko na odzi nokwar na ͻhwehwɛ Ne nkyɛn kwan na ͻyɛ dza ͻtsen ama pɛrpɛr egyina hͻ. Ɔwͻ dɛ obiara dzi nokwar wͻ no dwumadzi nyinara mu wͻ ne daadaa asetsena mu kyɛn dɛ obi bedzi ͻnoara no pɛ do na obeyi pɛrpɛr na nokwar akwa, na ͻbɛfa ndaadaa kwan do na wͻaka nsɛm a enyi nnda hͻ, na wͻakata nokwar do ma woenya Nyankoͻn n’ebufuw hyew.
Ɔwͻ dɛ obiara dze n’enyi si Nyankopͻn N’enyigye do na ͻdze yɛ ne botae. Mber bi nna Anohoba Messiah (ANN) no wͻ dɛ odzi dase wͻ ekuadwuma nsɛm bi ho. Nna manso esi wͻ ekuafo nye abɛhyɛmfo bi hͻn ntamu wͻ ndua bi ho. Na edwumayɛfo no nyim pefee dɛ Anohoba Messiah (ANN) yɛ nokwarfo, na Anohoba Messiah (ANN) no dzii dase wͻ ͻtsɛnbuafo no enyim dɛ ndua no yɛ edwumayɛfo no dze. Iyi maa Anohoba Messiah (ANN) n’egya na ne na nye n’ebusuafo binom enyi anngye no ho, naaso odzii nokwar dase. Iyi nye gyinabew a Anohoba Messiah (ANN) no kyerɛɛ dze yɛ fasusu to hͻ a ͻwͻ dɛ yedzi do. Dɛm fasusu yi ara na Nkͻnhyɛnyi Krͻnkrͻn (NNN) no so dze hyɛɛ hɛn na ͻkyerɛɛ hɛn dɛ yendzi do. Nyankopͻn aka dɛ obiara a odzi dasekrum botum adaadaa adasamba naaso Nyankopͻn dze Ohu dzebiara a yɛyɛ. Dɛm ntsi sɛ yɛka dɛ hɛn na yɛkyerɛ adasamba kwan pa no, na sɛ hɛn suban nye hɛn ndzeyɛɛ nye dza yɛka no bͻ abira a, dɛ mbrɛ ͻbɛyɛ ma yeenya mfaso kumaabi ntsi a, ͻno dze dɛ mbrɛ asomdwee na bambͻ etu kafo no, ͻdze basabasayɛ mbom bɛba hɛn asetsena mu.
Sɛ gyedzinyi ma ne ndze do tsia emindzi a, gyedɛ ͻnoara so dzi pɛrpɛr na ͻma nokwadzi gyinabew tu kafo na ͻma no dasedzi gyina Nyankopͻn Ne mbransɛm do. Surah Al Maidah no nyiyimu a meka ho asɛm no, kyerɛ pɛrpɛr gyinabew a ͻkͻ sor a Nyankopͻn pɛ dɛ yɛkyerɛ wͻ hɛn abrabͻ mu. Onnyi dɛ yedzi pɛrpɛr ma hɛnara hɛnho hɛnho mbom ͻwͻ dɛ yedzi pɛrpɛr ma hɛn atamfo mpo, osiandɛ hɛn atamfo so hwehwɛ dɛ yedzi pɛrpɛr wͻ hͻn ntamu. Ɔwͻ dɛ yetum ma hͻn enyidado dɛ yɛnye hͻn bedzi no pɛrpɛr. Ɔwͻ dɛ yɛkyerɛ hɛn atamfo mpo dɛ dza gyedzinyi yɛ biara, ͻyɛ wͻ nokwar nye nyamesuro kwan do. Dɛm ntsi enyitan nnkotum ama yeegyaa nokwar nye pɛrpɛr ekyir. Enyitan nnyi hɛn akoma mu na yɛbͻ no dawur dɛ yennyi ͻtan ketseketse mpo ma obiara. Ɔtan nnkotum ama yeefi nokwar na pɛrpɛr kwan do ama yeetum ahaw obiara. Iyi nye Islam ne nkyerɛkyerɛ pa no a dɛ yɛdze kyerɛkyerɛ a ͻhyɛ hͻn nkuran ma wonya pɛ bi dɛ wobebisa Islam ho nsɛm.
Ɔwͻ mu dɛ hɛn nsɛm botum atwe dͻm kukuankoma aba hɛn nkyɛn dze, mbom dza yɛbɛka afa asomdwee nye bambͻ ho no benya nsunsuando pa wͻ adasamba do wͻ aber a yɛdze bͻkͻ nyɛe mu. Sɛ Nyankopͻn ka dɛ ‘hom ntsintsim wͻ Allah No mu’ a, nna Ɔdze ahyɛdze kɛsenara na Ɔdze ahyɛ hɛn. Ha yi begyina pintsinn kyerɛ dɛ bedzi pɛrpɛr wͻ no kwan do na edze adwen na tsirmu pͻw bɛtae ekyir. Ɔnam mbͻdzenbͻ mber nyinara do na yebotum etsintsim pɛrpɛr, nokwardzi, asomdwee na banbͻ wͻ wiadze yi mu. Mber yi mu dze ͻyɛ agyedzifo mapa hͻn ahyɛdze.Ahmadiyyafo na ͻfata dɛ wͻ tsintsim pɛrpɛr, nokwar, asomdwee na bambͻ wͻ asaase yi do, na wͻfa N’akwan pa ahorow nyinara do. Siantsir nye dɛ hɛn mber yi do kandzinyi (Imam) akyerɛ hɛn Islam no kwan pa no na afei yɛbͻ mbͻdzen dɛ yɛdze mbransɛm so bɛyɛ edwuma. Na yɛker hɛnho hwɛ dɛ pɛrpɛr ahen na yɛridzi na yɛbͻhwɛ hɛn akoma mu dɛ dza Anohoba Messiah (ANN) dze hyɛ hɛn no, no mu ahen na yeetum dzi do.
Sɛ yɛyɛ dɛm a, ebɛnadze ntsi na yennya awerɛhyɛmu wͻ hɛn efie fie? Ebɛnadze ntsi na ͻdͻ nnyi hɛn awar mu? Ebɛnadze ntsi na koryɛ nnyi anuanom ntamu? Ebɛnadze ntsi na awar mu nkitahodzi sɛe osian adwen pa a yennya mma hɛnho ͻnye nokwar a yenndzi ntsi. Ebɛnadze ntsi na eguadzi a ͻda anyɛnkafo ntamu dze ͻtan na enyitan ba anyɛnkofo ntamu? Ebɛnadze ntsi na yɛdze nsɛm pii kͻdan Qadha Board (asɛndzibea). Ampaara siantsir ara nye dɛ nnyɛ dza ͻwͻ hɛn akoma mu no na yɛdze kͻ nyɛe do. Dza ͻwͻ akoma mu no nyehɛn ndzeyɛɛ bͻ ebira. Ɔwͻ dza yɛyɛ dze ma hɛnho nna ma yɛyɛ dze ma obinom so.Ɔwͻ dɛ Ahmadiyyanyi biara dwen asɛm yi ho yie. Dzibewdzifo nye Ahmadiyyanyi ankorankor biara ndwen kwan a wͻbɛfa do edzi pɛrpɛr ͻnye nokwar wͻ hͻn ahyɛdze nyinara mu a ͻbɛma yeenya Nyankopͻn N’enyigye.
Mbrɛ ͻtse biara ͻwͻ dɛ hɛn adwen kͻ Nyankopͻn No mbransɛm do na yɛdze kͻ nyɛe do. Anohoba Messiah (ANN) no ka dɛ, banbͻ na asomdwee nnyi bebiara kotsir Nyankopͻn Ne bambͻ no. Dɛm ntsi sɛ yɛannyɛ dza odzi mu na osi kwaa a, yennkotum enya Ne bambͻ no. Ana obi botum aka dɛ, sɛ nsukͻm dze obi a, na onya nsu kum kor pɛr a ͻbͻso no, anaa sɛ ͻkͻm dze obi so a edziban ntrͻma kor bͻso no anaa? Obiara ronntum nnka dɛ wͻamee gyedɛ woedzidzi na wͻanom yie. Dɛm saso ara na sɛ hɛn dwumadzi ennsi pi a, yɛrennya no mu aba pa. ndwuma sin nnsͻ Nyankopͻn enyi, dɛm ara so na nhyira mmba do. Nyankopͻn abͻ anohoba dɛ sɛ hɛn ndwuma sͻ N’enyi a Ohyira do.
Nyankopͻn dze Islam n’asomdwee na bambͻ ho dawurbͻ ho ahyɛdze ahyɛ hɛn nsa wͻ wiadze afanandze nyinara. Iyi ͻwͻ dɛ yɛdze pɛrpɛr na nokwardzi bͻ ho bra. Pɛrpɛryɛ bɛba wͻ aber a yɛbͻdwen Nyankopͻn Ne mbransɛm ho akͻ ekyir. Ɔwͻ dɛ yɛyɛ hɛn ahyɛdze ma Nyankopͻn nye nyimpa. Yɛserɛ dɛ Nyankopͻn bɛma hɛn tum ma yɛdze ahyɛ hɛn ahyɛdze mã. Na yeentum nyɛ hɛn efiefi nye ekuwekuw ma ͻnyɛ dɛ ahenman wͻ Islam no nkyerɛkyerɛ do.Na yeentum nhyɛ Tabligh ho ahyɛdze mã. Na yeentum mfa Islam nkyerɛkyerɛ pa a ͻfa pɛrpɛryɛ ho no mpetse wiadze no afanandze nyinara ama yeetum abͻ ho ban efi ͻsɛe mu. Wiadze yi rokͻ ͻsɛe kɛse mu wͻ ͻhaw do. Pɛrpɛryɛ nnyi Muslimfo nye hͻn a wͻnnyɛ Muslimfo hͻn mu. Nnyɛ dɛ pɛrpɛr nkotsee na yenndzi do eso yɛatra etsirmͻdzen ne hye nyinara. Dɛm mpɛmpɛndo yi Ahmadiyya Jama’at pɛr na obotum etwitwa agye wiadze yi efi ͻsɛe a ͻtse dɛm yi mu. Dɛm ntsi obiara mper dɛ ͻbɛyɛ n’afa mu dze na ͻdze mpaabͻ ataa ekyir. Pɛrpɛryɛ a onnyi Muslim amanaman mu ntsi ama ntawantawa aba hɛn mu, dɛmara so na ͻhaw a ofi amanadze akã hͻn. Tse dɛ mbrɛ ͻkõ kɛse ebegyina hͻn tsir do. Wiadze nnyaa nnhuu dɛm ͻhaw yi, dɛm ntsi o’ebu hͻn enyi agu do.dɛm ntsi Muhammad (NNN) No Messiah no nkoa pa no wͻ dɛ wͻyɛ hͻn afa mu dze na wͻbͻ mpaa kɛse.
Yɛserɛ dɛ Nyankopͻn bɛma hɛn tum ma yɛdze ahyɛ hɛn ahyɛdze mã na yeetum abͻ wiadze ho ban efi ͻsɛe mu.
Translated by: 1. Mr. Alhassan Kobina Atta-Wenchie
(Tutor in English Language, Jamiatul Mubashireen, Ghana)
2. Maulvi Alhassan Bashir Annan Sahib
(Tutor, Jamiatul Mubashireen, Ghana)
3. Rasheed Possible Essuman Sahib
(First Year Student, Jamiatul Mubashireen, Ghana)